NuuralHudaa	 Feb 11, 2018 0
Warri amantii hin qabne, hawaan tun akka tasaa uumamte jedhan. “Addunyaa tanarra dur dhoohinsa guddaa Big Bang jedhamutu ture. Innis dhoohee gaasiiwwan garagaraa uume. Gaasiin kun ammoo gaalaaksiiwwan garagaraa uume. Gaalaaksiin kun ammoo…
Halkan Dheerate: Kutaa 2ffaa
NuuralHudaa	 Feb 10, 2018 0
Gandi warra iftuu gama diinagdeetiin woyyaa qaba. garuu gama nageenyaatiin hamaadha. galgalli hundi galgala rakkinaati. qe’een isaanii yeroo hunda ganda balaati. Abbaan iftuu obbo Abdiin araada hamtuu takka qaba. qabeenya maatiin isaa jiruu…
Ummata naannoo Soomalee irraa buqqa’e deebisanii ijaaruudhaaf, Jiraattonni magaalaa Riyaad…
Sagantaan deeggarsa walitti qabuu kun dargaggoota Oromoo biyya Sa'udii magaalaa Riyaad keessa jiraataniin kan qophaa’e yoo tahu, hawaasni biyya keenyaa magaalaa Riyaad keessa jiraatu irratti argamun qooda kan fudhate tahuun beekameera.…
Addunyaan tun addunyaa waaniin isii namaa hin galle. addunyama tana keessa sooressi duniyaa waan godhu wollaales jira. addunyama tana keessa hiyyeessi jiruun cinqaa itti taatee waan godhu wollaaletu jira. gandi tokko ganda qananii, gandi…
Dubbiin akkana: Dubartiin tun Amber hughes jedhamti. haadha ijoollee afuriiti. dubartiin umriin isii 21 taate tun July 2015 yeree isiin ulfa ji’a torbaaf walakkaa taatu, ciniinsifattee gara hospitaalaa geeffamte. Haata’u malee, doktoroonni…
Xiyyaarri waraana Turkiyaa Suuriyaa naannawa magaalaa Afriin keessatti kan kufe tahuu prezdaant Rajab Xayyib Erdogaan beeksise. Prezdaant Erdogaan Sabtii har'aa walgahii dhaaba biyya bulchaa jiru irratti haasawa godheen "sa'aa muraasa dura…
Bineensota Soorata Malee Yeroo Dheeraa turuu dandahan.
Tana Quba Qabduu? Raacha Waqtii ganni galu dachiin Roobaan jiitee, biqiltoonni gosa hedduu biqiluu eegalu. Ilbiisonniifi lubbuqabeeyyiinis wayta kana dachiirratti baayyatu. Wayta ganni dabree roobni dhaabbatu ammoo,…
Ustaaz Ahmaddiin Jabal dabalatee miseensonni Koree furmaata barbaadduu hawaasa muslimaa afran mana hidhaa keessatti hafan, sanada dhiifamaa mootummaan akka irratti mallatteessanii mana hidhaatiii bayaniif qopheesse kan kuffisan tahuun…
Uumama lafa bishaan jalaa keessa jiraatu.
Bineensi Kun Sand Strike ykn Bobbit worm Jedhama. Garboota gurguddoo Jalatti boolla qotee jiraata.
Addunyaan tun uumama garagraatiin badhaatee jirti. Gariin isaanii faaydaa qabu. Gariin ammoo faaydaa nuuf hin mullanneen cinatti miidhaa hamaa qabu. arraaf raammollee akka addunyaatitti hammeenya guddaa qaban waliin ilaalla. BULLET…